GF (J) yakateedzana semi-yekubata ndiro yefiriji nefriji yuniti, China GF (J) yakateedzana semi-yekubata ndiro yefiriji nefriji unit Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Square Technology Boka Co, Ltd.
Sirifiti yeplate furiza inogadzirwa neProte Technology inogona kukurumidza kuomesa mhando zhinji dzezvigadzirwa, senge hove uye shrimp, hove, miriwo, nyama yakapatsanurwa, huku yekuparadzanisa, uye zvakawanda zvidiki-zvakapakirwa chikafu chakaomeswa. Mahwendefa anoiswa yakatwasuka kunge masherufu apo nzvimbo yakaturikidzana yakagadziriswa. Zvigadzirwa zvichaiswa pasherufu ndiro yekutonhora. Yakasiyana neyakajairika yakatwasuka ndiro mafiriji, saizi yayo yakakura inogona kuitirwa yepamusoro kutonhora kugona. Aya masherufu epafriji mafirita anogona zvakare kuve akagadzirwa necompressor unit.
◆ Icho mubatanidzwa wekufema furiza uye yekutaurisa giya. Chigadzirwa chinosangana nefriji yealuminium mufriji pazasi payo, nepo mafeni achivhuvhuta kutonhora kwemhepo ichiyerera kuburikidza nepamusoro uye mativi echigadzirwa.
◆Iyo ndiro yakaitwa yegungwa yegungwa aluminium. Iyo firiji inofamba nepakati penzira dzakawanda mukati meplate yealuminium. Iyo ndiro yakapfava, yakasimba, ngura-isingagadzirike uye yakanaka mukupisa kwekushisa.
◆Chimiro chinopisa-chakakurisa simbi, yakanyanyisa kuita ngura.
◆Iyo yakavharirwa yakavharirwa nechidimbu chimwe chePolyurethane inopupuma furo kuti ive nesimba rakasimba uye nekudzora kurasikirwa kwechando nekubvisa majoini.
◆Iyo firiji ine yakavakirwa-mukati chiGerman Bitzer yakawanda compressor yuniti. Inonyanya kushandisa magetsi. Iyo firiji system inogona kuve nechero, maviri kana matatu macompressers anomhanya panguva zvichienderana neicho chaicho firiji mutoro.
● Kutonhora kugona:> 3000kg / batch (Kubva pa: 15Kg / block, dhizaini dhizaini: 600mm × 400mm × 80mm)
●Plate nhamba: 10 Inotonhora matete: 10
●Plate inotonhora nzvimbo: 5500mm × 1200mm
●Kubviswa kweplate: 144mm; Chibvumirano cheNet: 110mm
●Liquid zvitengeswa: Pump
●Refrigeration mutoro: 105kw (+ 35 ℃ / -35 ℃) (Nemhepo inotonhorera)
●Infeed temp.:+20℃ Yakabudiswa temp.:-18℃
●Mhepo velocity pakati pamahwendefa: 2m / s
●Kunopindirana divi: 8520mm (L) × 2115mm (W) × 2360mm (H)